Conversocial: zotra ny serivisy ho an'ny mpanjifa haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Friday, May 10, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Betsaka ny orinasa mandefa ny hetsika ara-tsosialy ataon'izy ireo ao amin'ny departemantan'ny varotra misy azy ireo nefa tsy misy drafitra momba ny olan'ny mpanjifa. Tsy miraharaha ireo mpanjifa fa eo amin'ny media sosialy ianao mba hivarotra… tadiavin'izy ireo fotsiny ny hikarakarana ny olan'ny mpanjifany. Ny mampihomehy dia ny fandraisan'ny serivisy ny serivisy ny mpanjifa tsy hanimba tanteraka ny ezaka amin'ny varotra sosialy.
Conversocial dia tanjona namboarina ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ara-tsosialy, manome onjam-piasa mirindra miaraka amina endrika matanjaka sy mifantoka.
Endri-javatra ny Conversocial
Laharam-pahamehana amin'ny laharam-pahamehana - Ny maotera laharam-pahamehana ho an'ny fiaraha-monina dia mampiasa fanodinana ny fiteny voajanahary sy fandalinana ireo valiny manan-tantara mba hahazoana antoka fa afaka miatrika izay zava-dehibe amin'ny mpanjifanao ianao, aloha.
Fantsom-pifandraisana ho an'ny mpanjifa mavitrika - manatratra ny olan'ny mpanjifa mivoatra. Ny conversocial dia mampifandray anao amin'ny Twitter firehose, manome angon-drakitra kendrena izay tafiditra tanteraka ao anaty fizotran'ny asa tsy misy tohana sy laharam-pahamehana.
Efficient Workflow - Ny Conversocial dia manome rafitra ny fitantanana media sosialy, miaraka amin'ny Inbox Priority ho an'ny hafatra manan-danja. Ny fanodinana hafatra haingana sy mora dia midika fa na dia hita aza ny fifandraisana rehetra dia tsy misy fotoana lany.
Tantaran'ny resaka - Ataovy milamina tsara ny resaka misy tantaram-pifandraisana feno ho an'ny mpankafy sy mpanaraka anao. Tsy maninona izay maka olana, eo ihany ny tontolon-kevitra feno.
Fiara-miasa miaraka - Ny onjam-piaraha-miasa dia mamela anao hizara vaovao haingana, ary hamorona asa ho an'ny hafa. Ataovy mifandray amin'ny olona mety sy ny fampahalalana marina ny mpanjifanao.
Misaotra ny Avo ambany noho ny fandefasana momba an'i Curalate ao amin'ny lahatsoratr'izy ireo, Ireo fitaovana nomerika miverina farany ilaina amin'ny mpivarotra rehetra izao.
Tags: Serivisy ho an'ny mpanjifaFacebookhaino aman-jery sosialySocial Media MarketingTwitter
Mandika ny Google Analytics